Kedụ ka ụwa anyị a ga-adị n’ime nde narị afọ abụọ na iri ise? | Netwọk Mgbasa Ozi
Kedụ ka ụwa anyị a ga-adị n’ime nde narị afọ abụọ na iri ise?
Dabere na nkuzi nke plate Tectonics, e kewara mbara ala ụwa anyị ka ọ bụrụ mbadamba nke na-aga n'ihu, n'ihi ụda iyi nke uwe elu ụwa. Movementga n'ihu n'ihu na-aga nke kọntinent ga-eme nke ahụ n'ime nde afọ 250, ụwa anyị adịghị ka otú ọ dị taa.
Ọtụtụ nde afọ gara aga, mgbe etinyere oké osimiri na kọntinent, ọ dị naanị otu, Pangaea. Ruo taa, ngagharị nke mbadamba efere ndị ahụ na-ekewa kọntinent, yabụ oge ga-abịa mgbe, mgbe ọtụtụ nkewa, ha ga-esonye ọzọ. Kedụ ka ụwa anyị a ga-adị n’ime nde narị afọ abụọ na iri ise?
Business Insider haziri ihe ngosi, na-eji amụma sitere n'aka osote prọfesọ Christopher Scotese nke Mahadum Northwest, iji hụ ụwa n'ọdịnihu ọtụtụ nde afọ n'ọdịnihu. Ọ dị ka ebe dị nnọọ iche. O nwere ike bụrụ na, mgbe ịgbanwee efere ndị ahụ na-aga n'ihu, a ga-abịa oge mgbe kọntinent ga-alaghachi ọnụ dịka otu ma kpụọ nnukwu mpaghara.
Chee echiche banyere ụwa ebe mpaghara na-enweghị mpaghara. Mba niile nke ụwa ga-ebikọ n'otu mpaghara ụwa ma naanị ndị bi n'akụkụ nwere ike ịnụ ụtọ ụsọ oké osimiri na oke osimiri. Transportgbọ njem nke ụgbọ mmiri ga-adị oke ọnụ karịa ịkwaga n'ime ime obodo na ọnụ ọgụgụ dị elu nke ndị mmadụ na-enweghị ike ịga ije n'ụsọ osimiri n'ụzọ dị mfe.
Kọntinent ahụ na-apụ site na ibe ya na ndị ọzọ jikọtara ọnụ wee mepụta igwe mmadụ nwere ike ha na-etolite nnukwu mba ụwa. Ihe onyonyo ikpeazu bu uwa nwere oke osimiri nke juputara na otutu akuku, ma otutu ndi mmadu jikoro aka mezie otu nnukwu ala.
Iji hụ ya nke ọma, naanị ị ga-ekiri vidiyo ahụ. Nke a bụ ihe ụwa anyị ga-adị na 250 nde afọ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kedụ ka ụwa anyị a ga-adị n’ime nde narị afọ abụọ na iri ise?
Ọbịbịa nke Typhoon Talim na Japan na-eme ka mwepụ nke ihe karịrị mmadụ 600